Maamulka degmada Burtinle oo kormeeray Xarumaha waxbarashada (sawiro) – Radio Daljir
Maamulka degmada Burtinle oo kormeeray Xarumaha waxbarashada (sawiro)
Abriil 18, 2013 1:35 b 0
Burtinle, April 18- Maamulka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa maanta kormeeray goobaha waxbarashada ee degmada Burtinle.
Maamulka oo kormeerkiisan ku daraasaynaya heerka waxbarasho ee degmada ayaa kormeeray Dugsiyada sare ee degmada Burtinle sida Al-MUNTADAA secondary school iyo BURTINLE secondary school oo ay xilligaasi ku jireen arday farabadan oo qaadaynaysa duruustii maalinlaha ahayd.
Masuuliyiinta maamulka cusub ee degmada oo uu horkacayay guddoomiyaha degmada Burtinle mudane Liibaan Xirsi Khaliif ayaa kormeerkoodan ugu kuurgalaya waxbarashada degmada iyo baahiyaha ka jira ee u baahan wax ka qabashada.
Intii wafdigani ay kormeerkan ku jireen waxay warbixino kala duwan ka dhagaysteen maamulada dugsiyadan iyo macalimiinta qaarkood, waxayna booqdeen Fasalada ay duruustu ka socoto iyagoo la sheekaysanaya ardayda una jeedinaya kalmado wacyigalin ah.
Maamulka cusub ee degmada Burtinle wuxuu masuuliyiinta dugsiyadan sare ee degmada Burtinle kala hadlay sidii ay wada shaqeyn u dhex mari lahayd iyo qaabka ugu haboon ee wax looga qaban karo baahiyaha waxbarasho ee ay soo gudbiyeen.
Maamulka cusub ee degmada Burtinle dhawaan loo doortay ayaa dhawaantan waday dadaalo uu la kaashanayo qaybaha bulshada ee degmada oo wax looga badelayo dhinacyada Waxbarashada, Caafimaadka iyo Biyaha.
Wasaaradda waxbarashada Puntland oo tobabar u furtay kooxo tiro koob guud ku samaynaysa waxbarasahda Puntland
Bannaanbax lagu cambaaraynayey dhakhatar la dilay oo ka dhacay Caabudwaaq (Sawiro)